Ungamkhetha Kanjani Umhlinzeki Wensizakalo ye-imeyili | Martech Zone
NgoLwesine, Septhemba 10, 2015 NgoMsombuluko, Februwari 7, 2022 Douglas Karr
Kuleli sonto ngihlangane nenkampani ebicabanga ukuyeka umhlinzeki wabo we-imeyili nokwakha uhlelo lwabo lwe-imeyili ngaphakathi. Ukube wangibuza eminyakeni eyishumi eyedlule ukuthi ngabe bekuwumbono omuhle lowo, bengizothi cha. Kodwa-ke, izikhathi sezishintshile, futhi ubuchwepheshe bama-ESPs kulula kakhulu ukubusebenzisa uma wazi ukuthi wenzani. Kungakho sithuthukise i-CircuPress.
Yini eguquke nabahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili?
Ushintsho olukhulu ngama-ESP lube sekuhanjisweni. Empeleni akuwona ama-ESP aguqukile, ngama-ISPs. Ochwepheshe bokuhlinzekwa nge-imeyili kuma-ESP amakhulu babejwayele ukuxhumana ngqo nabahlinzeki bezinsizakalo ze-Intanethi ukuxazulula inkinga nokuqinisekisa ukulethwa okuhle. Ngokuhamba kwesikhathi, noma kunjalo, ama-ISPs avale lawo mahhovisi futhi aphendukela kuma-algorithms ukuqapha idumela lomthumeli, ukuhlaziya okuqukethwe, ukuvimba noma ukwamukela i-imeyili, nokukuhambisa kumafolda e-SPAM noma ebhokisini lokungenayo.
Khumbula ukuthi ukulethwa akusho ukungena ebhokisini lokungenayo! U-100% wama-imeyili akho kungenzeka ukuthi uya ku-Junk Folder, futhi lokho kulingana nokulethwa okungu-100%. Ukuthi usebenzisa i-ESP noma cha ayikunikezeli ithuba elingcono lokufinyelela ibhokisi lokungenayo uma wazi ukuthi wenzani. Kungakho kufanele usebenzise i- ukubekwa kwebhokisi lokungenayo platform ukuqapha.
Kunezici eziqondayo ukuthi Abahlinzeki Besevisi Ye-imeyili unikele ngokuthi ungafisi ukwenza kabusha okwangaphakathi, noma kunjalo. Kuzofanele uhlolisise izindleko zentuthuko kuzindleko zensizakalo ye-imeyili. Ngokubona kwami ​​siqu, lapho uqala ukuthumela amakhulu ezinkulungwane zama-imeyili ngenyanga, ungahle uthande ukubheka ukwakha isixazululo sakho.
Speed - Uma uthumela izigidi zama-imeyili ngosuku, ukuthuthukisa ingqalasizinda yenkampani efana nayo Cloud Cloud yokuthengisa mhlawumbe ngeke ize ibe nengqondo. Bangakwazi ukukhipha izigidigidi zama-imeyili ngaphandle kokucwayiza iso.
ubuchwepheshe - Uma ungenabo abasebenzi be-savvy noma udinga ukubanjwa ngesandla okuningi ngokwakhiwa nokwenziwa kwamasu akho wokumaketha nge-imeyili, awufuni nakancane ukwakha isisombululo sakho. Ungahle ufune ukusebenza nenkampani enkulu efana UDelivra ohlinzeka ngamakhasimende amnandi kakhulu.
Ukuphathwa kweBounce - Ukulethwa kwe-imeyili akulula njengokuthumela i-imeyili. Kunezinhlobo eziningi ze- izizathu zokuthi kungani ama-imeyili ehlaselwa futhi kufanele wakhe futhi uphathe inqubo yokunquma ukuthi uyithumela kabusha i-imeyili noma uzikhiphe ohlwini lomamukeli we-imeyili.
Ukuthotshelwa komthetho kwe-SPAM - Bangu imithetho ehlukene emhlabeni jikelele elawula ukusetshenziswa kwe-imeyili ukucela ukuhweba. Ukuqinisekisa ukuthi uyathobela kungakongela izinhlungu eziningi zekhanda.
Design - Ngabe udinga okwenziwe ngaphambilini isabele izifanekiso ze-imeyli noma imiklamo? Noma udinga ukuhudula bese uphonsa ukwakhiwa? Noma udinga ukuhlanganiswa kokuqukethwe okuthuthukile nokwenziwe ngokwezifiso ku-imeyili yakho? Uzofuna ukuqinisekisa ukuthi i-ESP yakho inamathuluzi namakhono owadingayo ukuze wenze ngezifiso futhi uthumele ama-imeyili kahle.
Ukubhalisa Kwababhalisile - Okuncamelayo kokuqukethwe, amafomu okubhalisela, nezikhungo ezingabhaliswanga kuyisihluthulelo sokuthola nokwenza i-imeyili eyenzelwe ababhalisile.
API - Ngabe ufuna ukuphatha ababhalisile, uhlu, i-contnet, nemikhankaso engaphandle kwe-ESP? Ukuqina API kubalulekile.
Ukuhlanganiswa Kwesithathu - Mhlawumbe ufuna ukuhlanganiswa okungekho eshalofini ohlelweni lwakho lokuphathwa kokuqukethwe (I-CircuPress inalokhu nge-WordPress), ipulatifomu yokuphathwa kobudlelwano beKhasimende, ipulatifomu ye-E-Commerce noma olunye uhlelo.
Ukubika - amazinga wokuchofoza, A / B ukuhlolwa, ukugcinwa kohlu, ukulandelwa kokuguqulwa, neminye imibiko eqinile ebika ngokuphelele ngayo amamethrikhi we-imeyili izokusiza ekwandiseni inani lohlelo lwakho lokuthengisa nge-imeyili. Qiniseka ukuthi uhlaziya futhi uqhathanisa izici ze-ESP ngayinye.
Futhi-ke, amanani entengo ayisihluthulelo! Asiboni mehluko omkhulu kakhulu kuzici phakathi kwabahlinzeki abaningi be-imeyili abaphezulu emakethe uma kuqhathaniswa nama-ESPs amancane. Uma unganciphisa izici ezingenhla ezibucayi enhlanganweni yakho, ngicabanga ukuthi ukuthenga ngentengo kunengqondo. Futhi uma uthumela izigidi zama-imeyili, kungahle kube nengqondo ukuhlanganisa nomuntu wesithathu onjengaye I-Sendgrid, noma wakhe uhlelo lwakho.
Tags: 250oki-can-spamisetyhulai-imeyili apiukuphathwa kwe-imeyili bounceukwakheka kwe-imeyiliubuchwepheshe be-imeyilii-imeyili infographicukuhlanganiswa kwe-imeyiliisivinini sokuthumela i-imeyiliisevisi ye-imeyiliumhlinzeki wesevisi ye-imeyiliukuhambisana ne-imeyili yogaxekileukuphathwa kwababhalisi be-imeyiliama-imeyiliespindlela yokukhethaumthetho wogaxekileukuphathwa kwababhalisile